Japana hanambara ny fanjakana vonjy taitra COVID-19 any amin'ny prefektiora valo hafa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Japon » Japana hanambara ny fanjakana vonjy taitra COVID-19 any amin'ny prefektiora valo hafa
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao Mafana Japon • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Sports • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Japana hanambara ny fanjakana vonjy taitra COVID-19 any amin'ny prefektiora 8 hafa
Ny prefektioran'i Hokkaido, Miyagi, Gifu, Aichi, Mie, Shiga, Okayama ary Hiroshima dia ho eo ambanin'ny State of Emergency manomboka ny zoma hatramin'ny 12 septambra izao.
Nanitatra ny fanjakana vonjy taitra coronavirus i Japon.
Ny fanitarana ny State of Emergency dia tonga satria Tokyo dia mitondra paralimpika.
Ny hopitaly manerana an'i Japon dia sahirana ao anatin'ny fihenan'ny COVID-19.
Raha ny loharanom-baovao avy amin'ny governemanta Japoney dia hanampy prefektiora valo fanampiny i COVID-19 State of Emergency izay mandrakotra an'i Tokyo sy faritra 12 hafa amin'izao fotoana izao, amin'ny fikasana hanakana ny tsunami voan'ny virus coronavirus.
Nihaona tamin'ny mpikambana ao amin'ny Kabinetrany ny praiminisitra Josh Yoshihide Suga, ao anatin'izany ny minisitry ny fahasalamana Norihisa Tamura sy Yasutoshi Nishimura, ny minisitra miandraikitra ny valin'ny COVID-19, mba hiadian-kevitra momba io hetsika io, miaraka amin'ny fanapaha-kevitra noraisina ho ofisialy tamin'ny fivorian'ny vondron'olona niasa tamin'ny Alarobia .
Eo ambanin'ny State of Emergency, ny trano fisakafoanana dia angatahina mba tsy hanolotra alikaola na hanolotra karaoke, ary asaina mikatona amin'ny 8 ora alina. Ny tranoben'ny varotra lehibe ao anatin'izany ny magazay sy toeram-pivarotana dia angatahana hametra ny isan'ny mpanjifa avela amin'ny fotoana iray.
Niantso ny besinimaro koa i Suga mba hampihena 50% ny fitsangantsanganana amin'ny faritra be olona, ​​ary hampiasain'ny mpiasa hiasa an-trano ny mpiasa ary hampihena 70% ny isan'ireo mpitatitra.
Ny fanitarana ny fanjakana vonjy taitra - efa mipetraka ao Tokyo ary koa Ibaraki, Tochigi, Gunma, Chiba, Saitama, Kanagawa, Shizuoka, Kyoto, Osaka, Hyogo, Fukuoka ary Okinawa dia prefektioran'ny renivohitra ny Paralimpika, tanterahina saika tsy misy mpijery, manomboka ny talata.
Ny governemanta dia vonona ihany koa hanitatra ny fanjakana misy ny vonjy taitra manakaiky ny prefektiora 16 ho an'ny efatra hafa - Kochi, Saga, Nagasaki ary Miyazaki - hoy ny loharanom-baovao, hetsika iray ahafahan'ny governora mametraka fameperana orinasa amin'ny faritra manokana fa tsy amin'ny iray manontolo. prefektiora.
Ny hopitaly manerana ny faritr'i Japon dia sahirana ao anatin'ny fihenan'ny tranga COVID-19, miaraka amin'ny tsy fahampian'ny fandriana izay manery ny olona mararin'ny soritr'aretina malemy kokoa hiatrika ao an-trano.
Ny herinandro lasa, ny Fikambanan'ny Governemanta nasionaly niantso ny governemanta hametraka fanjakana maika na fanjakana maika hamonjy ny firenena mba hamehezana ny fihanaky ny aretina.
Ny rivodoza In-Fa dia mandringa ny faritr'i Shanghai any Shina
Misokatra izao i India ho an'ireo mpizahatany vahiny vita vaksiny